Allgedo.com » Xarakada Al Shabaab oo afduub ku heysata dadka Soomaaliyeed iyo caalamka oo taasi ka dhiidhiyay.
Print here| By: allgedo.com: Thursday, November 24, 2011 // 7 Jawaabood
Odayaasha Beelaha Hawiye ayaa waxay shaaca ka qaadeen in Xarakada Al Shabaab ay afduub xoogan ku heysato dadka Soomaaliyeed, taasina ay keentay in Ciidamadda Kenya iyo Itoobiya ay gudaha u soo gallaan dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Golaha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Muqdisho, ayaa wuxuu si qoto dheer uu uga hadlay, Ciidamadda Dowladaha Itoobiya iyo Kenya ee gudaha u soo gallay dalka Somaliya.
“Haddii aysan Shabaab jireyn Ciidamadda Kenya iyo Itoobiya dalka Somaliya maysan soo galleen” ayuu yiri Maxamed Xasan Xaad, isagoo intaasi ku daray in Ciidamadda Dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay casuumaad ka helleen Al Shabaab.
“Al Shabaab iyadaa dalka ku soo casuumtay Ciidamadda Dowladaha Kenya iyo Itoobiya” ayuu markale yiri, isagoo Xarakada Al Shabaab ku timaamay mid dhibaato hor leh sii gellineysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Xarakada Al Shabaab ayaa wuxuu ugu baaqay inay ka daayaan Ummada Somaliyeed afduubka ay ku heystaan, ayna nabadda qaataan, haddii ay Al Shabaab nabadda qaadaneyso ayaa wuxuu sheegay, inay dhex dhexaadin doonaan labada dhinac.
Nabadoon Xaad ayaa wuxuu xusay in dalka Soomaaliya ay maanta ka jirto dhibaato oo dhan, isagoo taasi dusha u saariyay Xaraada Al Shabaab, oo uu ku tilmaamay kuwo jid iyo jihadiid ah, waa sida uu hadalka u dhigay’e.
Dhanka kale Mudane Maxamed Xasan Xaad ayaa wuxuu sheegay in caalamka iyo Dowladaha dariska ah ay ka dhiidhiyeen, afduubka uu sheegay in Xarakada Al Shabaab ay maanta ku heysato dadka Somaliyeed, isla-markaana wuxuu sheegay inay doonayaan inay wax ka qabtaan afduubka Al Shabaab.
Gudoomiyaha Golaha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, ayaa wuxuu ugu dambeen uu sheegay in Ciidamadda Dowladaha Kenya iyo Itoobiya, ay dalka dib uga bixi doonaan, waa haddii buu yiri ay Al Shabaab qaadaneyso wadada nabadda, taasoo uu ku sifeeyay inay tahay xalka kaliya ee maanta, looga fursan karaayo Itoobiya iyo Kenya.
7 Jawaabood " Xarakada Al Shabaab oo afduub ku heysata dadka Soomaaliyeed iyo caalamka oo taasi ka dhiidhiyay. "
ethiopian shalay c/lahi yusuf marku watay gaalo ayey ahayen maanta ma muslin bey noqden hawiye halke lo raca nabad ma raban waxa kaliya oo ay donayan wa bililiqo dowladnimo ma yaqanan inte la geya kuwan
Asc, Soomaalida waxay tiraahdaa ” Ileen Doofaar ma daahiro haduu durdur dabaasho” bal fiiriya ninka maanta hadlaya oo wax laga qoraayo, ninkaan wuxuu ahaan jiray Timo-jare wuxuuna uga Dalacay oday hawiye, kaas maanta raba inuu ummad ka dhaadhiciyo waxaan jirin, war soow maaha kuwii u sacab tumaayey burburkii doowladii dhexe Soomaaliyeed, in qabiilo soomaaliyeed la xasuuqo oo weliba hanti aduunyo waxay lahaayeen xoog lagu haysto, soow maaha kuwii gobollada dalka, Beerihii, Bakhaaradii, Guryihii, Dekadihii, airporadii xaaraan ku haysta, soow maaha nimanka ay caasimada Soomaaliya ka degi la’dahay, soow ma aha 21 sano nimanka diidan kala dambayn, doowladnimo iyo Ixtiraan. soow ma aha kuwii qoriga uun la ordaayey oo ummada dhibataynaayey. maxay tahay hada sababta uu u leeyahay Al-shabaabaa na dhibaataynaaya. Hadaba aniga waxaan leeyahay Al-shabaab annaga dan bay noo tahay, wax dhibaato ahna naguma hayso, waxay dhibta ku haysaa waa kuwii waxaysan lahayn raadin jiray, waana masiibo uu rabigeey idiin soo diray oo la idinku imtixaamaayo, waayo wixii qabqable dagaal ahaa, wixii oday xaaraan cun ahaa, wixii juhalada ahaa ee 21 sano doowlad diidanaa, waxay hoos fadhiyaan Amisom oo xitaa iskuma aaminaan in ay Muqdisho dhexmaraan, yaa heerkaas gaarsiiyey? Al-shabaab, hadaba aad baan ugu faraxsanahay in Al-shabaab ay sidaas idiin go’doomiyaan, Shalay waa taad lahaydeen Ethopian waa gaalo ee halagu jihaado, maantana waad usabcinaysaan, sababtu maxay tahay? waxaad rabtaan in aad ummad dhibkii iyo tuuganimo kula soo dhex noqotaan. Magacaas Hawiye isaga qaraabo, Amisomna iska hoos fadhi Ilaahbaa ku baday. Soomaalina ma ma tashid, Hadii ay Soomaalinimo Daacad kaa tahay Doowlad soomaaliyeed in la burburiyo, in Ummad Soomaaliyeed la xasuuqo, in hantidoodii la xalaalaysto midna raali kama noqoteen, waagaas ayaa hadal lagaaga baahnaa oo aad dhihi lahayd war waxaan ummada ha laga daayo, laakiin maanta ay aduunyo ku soo xirmatay, oo kuwo masiibo ah rabigeeey kuu soo diray inaad ku hadaaqdo magac soomaaliyeed kuuma haboona. Al-shabaabna way joogi ee ku bishaarayso.
waxaa tahay hore adigaa ugu heystay ummada hadii af duubkaadi laga baxay ma waxaad ka qabtaa dacwad
Asc. Odayaashan ku hadlaya magaca qabiilka waxay sheegeen arin dhab ah oo jirta. Waana la wada ogyahay inay Al-shabaab xoog iyo xaaraan ku haystaan shacaka. Laakiin waxaa is waydiin mudan, iyagoo magac qabiil had iyo jeer ku dooda, oo waliba qaarkood ay ilaa iyo maanta ay haystaan guryo ku yaala caasimada, (Xamar) ay lahaayeen qabiilo kale (Daarood) waa sida ay dad badan oo Xamar kasoo qaxay ay cadeeyeen e. Sidaas daraadeed, raga sidaas samaayay warkoodu waxba kama duwana dameero iska ciyay, waayo iyaguba xaqdarada Shabaabka laga sheeganayo mid la mid ah ayay ku dhaqmayaan, mar haday degan yihiin guryo aysan lahayn. Waxaa iyaduna ah wax laga xishoodo, inay samaysteen, urur ama nidaam qabiil ku dhisan, ileen iyagaaba qirtay e. Run ahaantii soomaalidu waxay iska raacsan tahay isticmaalida qabiilka, balse ilaa iyo hada lama hayo beelo kale oo si cad isugu raacay inay samaystaan nidaam qabiili ah.
Si kastaba ha noqotee, odayaashaa magaca qabiilka huwan, iyagoo jooga xiligii laga rabay, inay cibaado u istaagaan, ama ay u gudbaan Odayo dhaqameed soomaaliyeed ama ilaalinta dhaqanka soomaalida, iyo wax isu soo dhawayn.
waxaan aad uga xumahay in ninkasta oo nool hadalkiisa la dhageysto oo joornaalada lagu qoro bal arka nimankan 21 sano kadib ku assasineynaya hantidii dadkii la haa markii ay weydiisteen arintaana waxaa tusaala u ah marxuum aadan buulle ayadoonaba la eegin 21 sano ee la soo dhaafay waxii ay geeysteen marka sidee baa dadkaa aad dooneysaan in aad dowladnimo ula wadaagtaan waa suaal idiintaal jawaabteeda
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar ayaan laqabaa oo soo qoray wiii aan ugu jawaabi lahaa ninkaas wax u jawaaba waaya
qaar hawiye ka mid ah ma xishoonayaan waxii maslaxdoda ahna waa wadayaabn ilaa ay xaqa baadil u badalaan shalay markii daarood madaxweyne ahaa itoobiya cadaw ayey ahayd maanta oo hawiye joogo koluu sheydaanka ku jiro walaalo iyo sxbo
Waxaa la doonayaa in dadku bartaan iney u hadlaan si mowduucinnimo ah. Mowduuci waa qofka inuu ka hadlaa arrinta laga hadlayo ee uusan qofka isku mashquulin. Hadalkaan Xasan Xaad sheegey ma saxbaa mise waa qalad meeshii laga doodi lahaa, mowduucii dhammaa dhinacbaa inta la iska dhigey,waxaa lagu yaacayaa odey Xaad!
Midda kale haddaad qof ku weerarto qabiilkiisa midna kusoo dhaweysato, waxaad ku talo gashey inaan weligeed la isku imaan! Sababtoo ah dadku isku qabiilooyin ma ahan.
Marka dadka qeybta ra,yiga ku qorey waxey u baahanyihiin dhaqan celin weyn oo xagga aragtida siyaasadda ah!
Shabaabku waa habaar ka dhashey kala fogaanshaha iyo cuqdadda dhex taalla soomaalida. Haddii ummaddii is diidey oo mid kastaa kan kale uusan dooneyn,ciyaalkeenni waxey kalsoonidoodi siiyeen argagixiso carbeed iyo ajaanib lacalla iney uga roonaadaan ummaddaan aan is arki karin oo qabyaaladdu indho tirtey!